Shares Hold Ground as China Virus Fears Persist | Myanmar Business Today
Home Business Regional Shares Hold Ground as China Virus Fears Persist
Asian shares held their ground as trade slowed for the Lunar New Year, despite investors’ fears thatanew coronavirus in China could spread faster as millions of people would be travelling over the week-long holiday.
Markets had steadied as investors took some solace from the World Health Organization labeling the outbreak an emergency for China but not, as yet, for the rest of the world.
MSCI’s broadest index of Asia-Pacific shares outside Japan rose 0.1 percent, while Japan’s Nikkei easedamarginal 0.05 percent and Australian stocks added 0.3 percent.
Trade in Asia slowed down for the Lunar New Year holiday, with financial markets in China, Taiwan and South Korea closed on January 24
Indeed, National Australia Bank’s research team tentatively estimated China’s GDP growth for the first quarter could be hit by around 1 percent point by this deadly coronavirus outbreak.
The Japanese currency traded at 109.47 per dollar, having risen toatwo-week high of 109.26 yen on January 23.
Brent crude futures shed as much as 0.16 percent to below $62abarrel in early Asian trade on January 24, its lowest since December 4, after falling 1.9 percent the previous session.
U.S. West Texas Intermediate (WTI) futures declined as much as 0.22 percent to $55.47 and were on course fora5 percent fall for the week.
တရုတ်နိုင်ငံမှအစပြုပြီး လူသန်းပေါင်းများစွာကို လျင်လျင်မြန်မြန်ပျံ့နှံ့လွယ်သော coronavirus ပေါ်ပေါက်လာကာ လူအများကို စိုးရိမ်စရာဖြစ်စေခြင်း နှင့် တရုတ်နှစ်သစ်ကူးချိန်ရောက်လာသည့်အတွက် ကုန်သွယ်မှှုနှေးကွေးနေခြင်းတို့ ဖြစ်နေသော်လည်း အာရှရှယ်ယာများသည် တည်ငြိမ်နေဆဲဖြစ်သည်။
ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့၏ တရုတ်နိုင်ငံကိုအခြေအနေအဖြစ်သတ်မှတ်လိုက်ခြင်းက ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများ ကို စိတ်သက်သာစရာအဖြစ်ပေးခဲ့ပြီး ဈေးကွက်ကိုတည်ငြိမ်စေခဲ့သည်။
ဂျပန်ပြင်ပရှိအာရှပစိဖိတ်ရှယ်ယာများ၏ MSCI ၏အကျယ်ပြန့်ဆုံးအညွှန်းကိန်းသည် ဝ.၁ ရာခိုင်နှုန်းမြင့်တက်ခဲ့ပြီး ဂျပန်မှ Nikkei သည် ဝ.၀၅ ရာခိုင်နှုန်းနှင့်သြစတြေးလျစတော့ရှယ်ယာသည် ဝ.၃ ရာခိုင်နှုန်းမြင့်တက်ခဲ့သည်။
တရုတ်နှစ်သစ်ကူးအားလပ်ရက်တွင် အာရှကုန်သွယ်ရေးသည်နှေးကွေးနေပြီး ဇန်နဝါရီ ၂၄ ရက်တွင် တရုတ် ၊ တိုင်ဝမ်၊ တောင်ကိုရီးယားရှိ ငွေကြေးဈေးကွက်များကို ပိတ်ထားခဲ့သည်။
” တရုတ်စီးပွားရေးအေးနေတဲ့ အချိန်မှာ ဒီ coronavirus ကူးစက်မှှုက စားသုံးသူ ကျဆင်းစေလိမ့်မယ်လို့ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတွေက ပူပန်နေကြတာ ” ဟု Libra Investments မှ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှှုဆိုင်ရာ အရာရှိ Yasuo Sakuma က ဆိုသည်။
အဆိုပါ Virus ကူးစက်မှှုကြောင့် ပထမသုံးလပတ်အတွင်း တရုတ်၏ အသားတင်ထုတ်ကုန်တန်ဖိုးသည် တစ်ရာခိုင်နှှုန်းခန့်ကျဆင်းသွားဖွယ်ရှိကြောင်း National Australia Bank (NAB) ၏ သုတေသနအဖွဲ့က ခန့်မှန်းထားသည်။
” ဒီအခြေအနေတွေက တရုတ်စီးပွားရေးကိုတော့ နည်းနည်းဖြစ်ဖြစ်သက်ရောက်မှှုရှိစေနိုင်ပါတယ် ” ဟု NAB ၏ စီးပွားရေးဆိုင်ရာ ဒါရိုက်တာ Tapas Strickland က ဆိုသည်။
ကပ်ရောဂါနှင့်ပတ်သက်ပြီး WHO ၏ ရပ်တည်ချက်သည် အမေရိကန်ဈေးကွက်အတွက် ကယ်ဆယ်ရာ ရောက်ပြီး ရောဂါဖြစ်ပွားမှှုကို တိုင်းတာရန် မြို့ကြီးများနှင့် မြို့ပြအနီးရှိ လူ ၂၆ သန်းကို ပိတ်ဆို့ထားပြီး ခရီးသွားလာခွင့်ကိုပါ ကန့်သတ်လိုက်သည်။ ပေကျင်းနှင့်မကာအိုတို့တွင် နှစ်သစ်ကူးပွဲတော်များကို တားမြစ်ထားသည်။
ဗိုင်းရပ်စ်နှင့် ပတ်သက်၍ စိုးရိမ်ပူပန်မှုများသည်ငွေကြေးဈေးကွက် ယန်းငွေကို အားကောင်းရာရောက်စေသည်။ ဂျပန်ငွေကြေးသည်တစ်ဒေါ်လာလျှင် ၁၀၉.၄၇ ရှိရာမှာ ဇန်နဝါရီလ ၂၃ ရက်တွင်နှစ်ပါတ်ယန်း ၁၀၉.၂၆ အထိမြင့်တက်လာခဲ့သည်။ သို့သော်လည်း ဗိုင်းရပ်စ်ကိစ္စသည် ကုန်ဈေးနှုန်းများအပေါ် သက်ရောက်မှှုကြီးမားဆဲဖြစ်သည်။
SOURCETomo Uetake (Reuters)
Previous articleUber Sells Food Delivery Business in India
Next articleEven “Bare Bones” EU-Britain Deal Will Be Complex: Diplomats